IMALI HEIST 5 UKUBUYA KUQINISEKISWE NGUPINA, UFANS UXHASA U-EL PROFESSOR - IINKQUBO ZETV
Imali Heist ngokungathandabuzekiyo yenye yeepic blockbusters zeNetflix. Uthotho lwamaxesha onyaka amane luyiphakamisile ibha
Imali Heist ngokungathandabuzekiyo yenye yeepic blockbusters zeNetflix. Uthotho lwamaxesha onyaka amane luphakamise ibha phezulu kakhulu kwabanye kangangokuba kuthiwa, uninzi lweencwadi zeempendulo ziye emgqomeni zizama ukubadlula.
Abalandeli bebedanisa uBella Ciao emva kokuba uEl Professor eyigqibile ingoma! Ukusuka eHalloween ukuya kumatheko okuvalelisa, iimpahla ezibomvu ziziko elitsha kunye nefashoni ngoku. Ungalibali ukuba linani elinamaxesha alishumi elinanye amantombazana atyhola uProfesa wethu othandekayo!
Umboniso ekugqibeleni uza kubuya, nangona besilindele ukubuya, kuba asibonanga sizathu sokuba HAYI.
UAlex Pina uqinisekisa umboniso
Umenzi womboniso ikwangomnye wobuso emva kwekhamera ukwenza olu ngcelele iwotshi enika umdla kubalandeli, uAlex Pina, kutshanje uthathe ku-Instagram ukuqinisekisa ukubuya kwesizini yesihlanu yomboniso, kwaye abalandeli baya ku'Hurra. '
Nokuba ziinyanga ezintathu kwaye isibhengezo Sele ivuliwe! I-2020 iphela yahamba abalandeli begxalathelana kwaye bevuyisana noNjingalwazi kunye neqela lakhe njengoko beqhubeka nesicwangciso sabo sebhongo 'kungekho nto bazakuphulukana nayo.'
Yintoni umlingisi wexesha lesihlanu?
Iinkwenkwezi zemiboniso Abanye babadlali ababalaseleyo nabanobuchule obubonwa lushishino. Ekunene ukusuka
U-vlvaro Morte wenza uMfundisi wethu esimthandayo
U-ularsula Corberó njengeTokyo
Itziar Ituño njengoRaquel Murillo
U-Esther Acebo njengoMonica Gaztambide
UMiguel Herrán esenza indima yeRio
UDarko Peric njengoHelsinki.
Kwakhona, uJaime Lorente (Denver)
IHovik Keuchkerian (Bogotá)
ULuka Peros (Marseille)
IBelén Cuesta (eManila)
UFernando Cayo (uColonel Tamayo)
IRodrigo de la Serna (iPalermo)
UNajwa Nimri (uMhloli weSierra)
kwaye u-José Manuel Poga (Gandía) bayabuya kwaye singamlibala njani oyena mntu une-nerve-wracking ngalo lonke ixesha. Ngubani ongafiyo nje, uArturo Roman odlalwe ngu-Enrique Arce.
Yiyo loo nto umboniso uneqela lomculo eliza kujongana nawo kwisizini yesihlanu.
Kutshanje. INetflix iSpain yathatha i-Instagram ukuthumela ividiyo eneNjingalwazi, uLisbon, kunye noAlicia, ebizwa ngokuba 'yiVolvemos.'
Liya kuba yintoni iqhinga lonyaka wesihlanu?
Njengasekupheleni kwexesha lesi-4, sabona uLisbon ethatha uhambo oluya kwihelikopta yomkhosi kwaye ethatha uphahla kuphahla lwendawo eyayiqhubeka kuyo.
Njengokuba esiwa eluphahleni ezenze ngathi ligosa lohlangulo kwaye uNjingalwazi kunye neqela bakhohlisa amapolisa ukuba acinge ngokufanayo. Amagqabantshintshi!
Njengoko edibana neqela, yonke into iba neemvakalelo. Kwaye iqela liyalila ekuphumeleleni komsebenzi kunye nokuqonda kancinci ukuba baphulukene neqela labo laseNairobi. Ngeli xesha, begonene omnye nomnye, bayakhwaza bonke 'baseNairobi'.
Ekugqibeleni, sibona uMhloli u-Alicia Sierra efumanisa ukufihla kukaNjingalwazi kwaye bobabini bakhupha umpu omnye komnye.
Ukuqukumbela, kuya kuba kufanelekile ukubona ukuba kwenzeka ntoni emva koko, nokuba uNjingalwazi uyamkhohlisa uAlicia, okanye amaqela adibana naye. Okanye mhlawumbi omnye wabo uyadutyulwa. Ngubani owaziyo?
Umboniso, ukuba uphuma ngo-2020 okanye ngo-2021. Masibe nethemba lokuba uNjingalwazi ukhuselekile kwaye i-heist ifikelela kumdlalo wokugqibela.
liphuma nini ixesha lesi-3 sesikere esixhenxe
umsebenzi omdaka 1998 cast
Umboniso bhanyabhanya malunga nezithixo zamaGrike
xa indoda enye yenqindi isizini 3 ikhululwa
yaphela nini i-rick kunye ne-morty season 2
ujeremy renner tom cruise
iingoma kumculo wesikolo esiphakamileyo